Sonke siyakuthanda ieholide, amaqela athathwe ngokugqithiseleyo kunye namaqhinga. Ngoko ke, phambi kweeholide, ngamnye wethu uya kuhamba emigudu yokulungiselela, ehambelana ngqo nokukhethwa kwengubo egqobileyo. Nantsi kuyimfuneko ukufaka yonke ingcinga yakho ukuze ukhethe ngempumelelo i-suit emele ikhunjulwe ngumntu wonke. Emva kwakho konke, ukubheka iholide ngokukhawuleza, ngokukhawuleza kwaye ngexesha elifanayo ndingathanda nonke. Siyakunceda ukuba uzenzele i-suit of a good forest-footed dweller kunye neebhere. Kwimeko enjalo ngokuqinisekileyo uya kukukholisa intsapho yakho kunye nabahlobo ngokuguqula i-party party kwi-holiday tale holiday!
Yiyiphi into yokugubha iingubo zeebhere?
Ukuze sikhonze iindwangu zebhere, sidinga izikhala. Ndingafumanaphi na? Ngethuba lethu alinzima, kuba kunaliphi na isitoreli ngoku kukho uluhlu olukhulu kakhulu lwesithenti esincinci, esilungele ukuthunga iingubo zebhebhe. Kwaye unokwenza lula nokuba wenze izinto ezidala eziqinisekileyo ukuba zifumaneke kwi-wardrobe yakho. Ezi zinto, njengomyalo, ziqamba "zingenzi lutho" kwaye zithatha indawo engaphezulu. Ngoko kutheni ungabongezeleli kwimeko! Isiseko seengubo yebhebhe sinokuba yinto evumelekileyo okanye i-brown yonke. Esi sambatho kufuneka sitshintshwe kancane, sisuse izixhobo ezingadingekile kwaye songeze izinto eziyimfuneko. Ufuna nje ukufaka ingcamango yakho kwaye usebenzise umzobo weebhere elihle.
Iindleko ze-Bear: Iinkcukacha eziyimfuneko
Ukuthunga iingubo zebhere, kufuneka sifumane ubunzima obudala bomhlaba obunobumba obomdaka okanye obunqabileyo.
Ngoko, vula i-jumpsuit ibe ibhere cub. Kule nto, siyakubhalela indawo ezivelele ze-overalls kunye noboya okanye obomvu obunobumba kwaye uyigubungele indlu. Emva koko kubomvu obunjalo okanye kuluhlu olufanayo sisinqumla iindlebe size sizincede kwi-hood. Kwiiglavu ezibomvu, unako ukuthungula izicelo ngendlela yeenyawo zeebhere. Ezi zicelo zingenziwa kumaphepha alula. Unokuyongeza into enjalo kunye nomaski oqhelekileyo owenziweyo owenziweyo. Indleko yethu ikulungele!
Ukuba awufumananga ukufaneleka okanye ukuhambelana, musa ukuthukuthela, kuba kulula ukucetyiswa, usebenzisa iipateni ezinjalo zokugqithisa kwiimagazini.
Ngendlela, endaweni ye-hood, ungayibamba intloko yangempela yeebhere, eziza kubonakala zikhulu nge-suit. Ukuze sithungele, sidinga i-velvet emdaka, sifuna ukwenza iphethini yangaphambili nangemuva kwentloko, sithinte imilinganiselo efunekayo.
Iibhere zamehlo zinokwenziwa kwiifowuni eziqhelekileyo. Ungasebenzisa amaqhosha anemibhobho emine, ukuthunga umnqamlezo wabo emnqamlezweni.
Yaye inkcazelo yokugqibela yeendleko zethu yimilenze yemilenze yebheja elibhekele. Ukulungiswa kwazo sidinga ubumvu kumbala we-suit kunye nesigxina esicacileyo. Ukunquma imilenze yemilenze kufana nezicathulo zesihlangu. Sifaka unyawo kwaye senze iinkcukacha ezimbini zeengqungquthela ezivela kwintsimbi. Musa ukulibala ukwenza izibonelelo zemigangatho. Kusuka kwinqanaba elincinci kakhulu lesithende ukuya kwinqanaba elincinci le-toe, kufuneka silinganise umgama kunye nomda wecala. Senza kwiphepha lephepha umzobo wobude. Ngenxa yoko, sifumana umgca ohlangene necala kunye neyodwa.
Senza i-perpendicular ukusuka kwinqanaba le-convex yesithende kwaye ukhangele ukuphakama ngendawo apho umgca ukhankanywe khona, ohambelana nokuxhamla kwinqanaba le-lateral kunye neyodwa. Kule ndawo, silinganisa umlenze ophantsi. Hlukanisa umphumo we-2 uze udibanise ama-5 cm kunye nezibonelelo kwi-seams. Ukususela ekupheleni kwe-perpendicular siyeka ukutshintshwa kwesiqhamo. Sidibanisa iphuzu lokugqibela kunye neyona nkcazelo ephezulu ye-sock. Ngoku sinomzekelo weshafu esecaleni.
Cima iphethini kunye nelokungahambi kakuhle, ujikeleze ngobunono, ungeze ii-2 centimeters kwisibonelelo esiphezulu kunye no-1.5 centimeters ukuya kwinqanaba. Kufuneka sibe neenkcukacha ezine. Sadibana neenkcukacha ukwenzela ukuba badibane nomntu. Sitshintshela i-back and front seams. Ngecala elingalunganga kufuneka sikhuphe isibonelelo esiphezulu, size sibonce i-paws. Siphendulela umsebenzi osebenzayo ngaphakathi kwaye sidibanise kunye nodwa.
Ukudibanisa i-stitch seams kwaye sibeka i-band elastic! I-Paws ukuhambelana neebhere zilungele!
Indlela yokuwubetha ngetyhini?
Indlela yokudweba isikolo kunye nootitshala kwipensile kunye nemibala: iifoto ezithatha ngeyanyathelo kubantwana
Ukunyangwa kwamaqanda kwiintsana
Indlela yokutsala kunye nomdla wakho indoda ethandekayo
I-Cappacci ene-ice cream ye-ice cream kunye nekrimu
I-Crafts for Easter ye-nursergen ngezandla zabo: amaqanda kunye nomthi wePasika
Uvavanyo: Indlela yokukhetha i-oven microwave
Isimo sezulu eMoscow ngoDisemba 2017 - Isibikezelo se-Hydrometcenter kwi-capital kunye nommandla waseMoscow ekuqaleni nasekupheleni kwenyanga
Umxube ocolileyo we-pea
Isiqhamo kwiwayini elibomvu le-pizza
Iilfabhethi kunye neeleta zomntwana omncinci